Afganistan: Qarax loo adeegsaday gaari Ambalaas ah oo ka dhacay Kabul – Kasmo Newspaper
Afganistan: Qarax loo adeegsaday gaari Ambalaas ah oo ka dhacay Kabul
Updated - January 27, 2018 12:25 pm GMT
London (Kasmo), Qarax loo adeegsaday gaari Ambalaas ah ayaa saaka ka dhacay Kabul, Caasimadda Afganistan, saraakiisha Caafimaadkuna waxay tirada geerida gaarsiiyeen 95, dhaawacana 158 qofood oo badankood la dhigay Dhakhtarka ‘Jamhuriat Hospital’ oo aan goobta ka fogeyn.
Ambalaasta oo laga soo buuxiyay walxaha qarxa ayaa si khiyaamo ah uga so tallaabay bar ilaalo wuxuuna toos u abbaaray aagga Wasaaraddii hore ee Arrimaha Gudaha oo ay ku yaalliin xarumaha Dibolomaasiyadda iyo xafiisyada Xukuumadda.
Saacado yar ka dib waxaa qaraxa sheegtay Ururka Taliban ee horey uga talin jiray dalka intii u dhexeysay 1996-2001, kuwaas oo toddobaadkii hore ku dilay Hutel Intercontinental 22 qof oo 4 ka mid ah Maraykan ahaayeen.
Afganistan waxaa wali ku sugan ilaa 15,000 oo ciidanka NATO ah, kuwaas oo sannadkii 2011kii tiradoodu mar gaartay 150,000 oo askari, laakiin ciidanka dalka ee tirada badan oo ay tababarka siiyeen kuma filla gacan ku-haynta nabadgalyada.
Ururka Taliban oo reer galbeedka ugaarsada waxaa la qiyaasaa in ay haystaan 40-60,000 oo dagaalyahan, dhanka bari ee dalkana waxaa jooga Daacish oo ilaa 1,000 ciidan ah oo qaarkood Foreign Fighters yihiin ku haysta.